Buddha Gaya | GO & GO Travels
ဘုရားရှင်ကိုယ်စား အလေးအမြတ်ထားရာ ဗုဒ္ဓဂါယာဒေသသို့ ဗုဒ္ဓဂါယာ ( ၈ ရက်။ ၇ ည )ဘုရားဖူးခရီးစဉ်
Day 01 : ရန်ကုန် - ဗုဒ္ဓဂယာ ( -/ L/ D )
ဗုဒ္ဓဂယာလေဆိပ်သို့ရောက်ရှိချိန်တွင်အိန္ဒိယတာဝန်ခံနှင့်ဧည့်လမ်းညွှန်တို့မှာခရီးဦးကြိုဆိုမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ဗုဒ္ဓဂါယာမှမဟာဗောဓိစေတီ၊မဟာဗောဓိပင်၊ နေရဉ္စာမြစ် နှင့် သုဇာတာသူဌေးသမီးနေထိုင် ခဲ့ရာအိမ်ယာ၊တို့ကို သွားရောက်လည်ပတ် ဖူးမျှော် မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက်ဟိုတယ်၌ညစာသုံးဆောင် ပြီးအိပ်စက် အနားယူမည်ဖြစ်ပါသည်။
Day 02 : ဗုဒ္ဓဂယာ - ဗာရာဏသီ ( B/ L/ D )
ဟိုတယ်၌နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်ဗာရာဏသီသို့ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဗာရာဏသီမြို့ရှိ မြတ်စွာဘုရားသီတင်းသုံးခဲ့သောနန္ဒိယကျောင်းတော်၊ချောက်ခဏ္ဏီစေတီ၊ဓမ္မရာဇိကစေတီ၊ စမ္မေခစေတီ၊ အာသောကကျောက်စာတိုင်၊ မူလဂန္ဓကူဋီတိုက်နှင့် မိဂဒါဝုန်ပြတိုက် သို့သွားရောက်လည်ပတ် ဖူးမျှော်ပါမည်။ ထို့နောက် ဟိုတယ်၌ ညစာသုံးဆောင်ပြီးနောက် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 03 : ဗာရာဏသီ - သာဝတ္ထိ ( B/ L/ D )
နံနက်အစောပိုင်းတွင်ဂင်္ဂါမြစ်အတွင်း၌ လှေစီး၍နေထွက်ရာ အလှတရားကို ခံစားမည်ဖြစ်သည်။ ဟိုတယ်၌နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် သာဝတ္ထီသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်သည် ။ နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်သရက်ဖြူကုန်း၊ ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်၊ သာဝတ္ထိမြို့တံခါးဟောင်း၊ အာနန္ဒာဗောဒိပင်၊ အနာထပိဏ်စေတီတော်၊ အင်္ဂုလိမာလစေတီတော် နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများသို့သွားရောက်ဖူးမျှော်ပါမည်။ ဟိုတယ်၌ညစာသုံးဆောင်ပြီးအိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 04 : သာဝတ္ထိ - လုမ္ဗိနီ ( B/ L/ D )
ဟိုတယ်၌ နံနက်စာ သုံးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်လုမ္ဗိနီသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာပါမည် ။နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် လုမ္ဗိနီရှိ၊ လုမ္ဗိနီဥယျာဉ်၊ မယ်တော်မာယာကျောင်းတော်၊ ကပ္ပိလ၀တ်နန်းတော်ရာ၊ အာသောကကျောက်စာတိုင် နှင့်တိဗက်၊ ဗီယက်နန်၊ဂျပန်တို့မှ တည်ထားခဲ့သောဘုရားများကိုလည်း၊ သွားရောက်ဖူးမျှော်ပါမည်။ ထို့နောက် ဟိုတယ်၌ ညစာသုံးဆောင်ပြီးနောက် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 05 : လုမ္ဗိနီ - ကုသိနာရုံ ( B/ L/ D )
ဟိုတယ်၌နံနက်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ကုသိနာရုံသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာပါမည်။နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ကုသိနာရုံရှိ မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာနစံရာမဟာပရိနဗ္ဗာနစေတီ၊ ပရိနိဗ္ဗာနရုပ်ပွားတော်၊ တေဇောဓါတ်လောက် ကျွမ်းရာအင်္ဂါရစေတီတော်၊ ရေကြည်တော် သပ္ပါယ်သောနေရာ စသည်တို့ကို သွားရောက်ဖူးမျှော်ပါမည်။ ညစာကိုဟိုတယ်၌ သုံးဆောင်ပြီးနောက် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 06 : ကုသိနာရုံ - ဝေသာလီ - ပတ္တနား ( B/ L/ D )
နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ဗုဒ္ဓဂါယာသို့ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပြီး လမ်းခရီးတွင်ဝေသာလီသို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဝေသာလီတွင် လည်ပတ်ပြီးနောက် ပတ္တနားသို့ဆက်လက်ထွက်ခွာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ပတ္တနားရှိ ဟိုတယ်တွင် ညစာသုံးဆောင်ပြီးနောက် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 07 :ပတ္တနား - နာလန္ဒာ - ရာဇဂြိုလ် - ဗုဒ္ဓဂယာ ( B/ L/ D )
ဟိုတယ်၌ နံနက်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် နာလန္ဒာရှိ ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံးနာလန္ဒာတက္ကသိုလ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့်စေတီပုထိုးများသို့ သွားရောက် လည်ပတ်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ရာဇဂြိုလ်သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာမည်ဖြစသည်။ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ရာဇဂြိုလ်ရှိဂျပန်နိုင်ငံမှ တည်ထားသော ကမာကူရထိုင်တော်မူဘုရားကြီး၊ ဘကအဂေိဇ္စုကုဋ်တောင် ၊ဝေဠုဝန်ကျောင်းတို့ကို သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ ထို့နောက် ဗုဒ္ဓဂယာသို့ပြန်လာပြီး ဟိုတယ်၌ညစာသုံးဆောင်ပြီးနောက် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 08 : ဗုဒ္ဓဂယာ - ရန်ကုန် ( B/ L/ X )
ဟိုတယ်၌ နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ရန်ကုန်သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာရန်လေဆိပ်သို့သွားရောက်မည်ဖြစ်သည်။
ခရီးစဉ်ဈေးနှုန်း( တစ်ဦးလျှင် ကျသင့်ငွေ US$ )
8 Ds India – Nepal Buddha Gaya
ထွက်ခွါမည့်ရက်များ - အောက်တိုဘာ ( ၂၇။၂၈ )၊ နိုဝင်ဘာ ( ၁၈။၂၁ )၊ ဒီဇင်ဘာ ( ၉ )၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ( ၁၀။၁၇။၂၄ )၊ မတ် ( ၁၄ )
Bodh Gaya = TajDarbar Hotel( Or ) Similar
Varanasi = Clarks Hotel( Or ) Similar
Sravasti = Lotus Nikko Hotel( Or ) Similar
Lumbini = Nansc Hotel ( Or ) Similar
Kushinagar = Lotus Nikko Hotel( Or ) Similar
Patna = Chankaya Hotel( Or ) Similar
1. Accommodation = Hotel on Triple Basis for Total7Nights
2. Transport = 35seaterAirconditioned Deluxe Transport with Air Suspension
3. Meals =7Breakfast,7Lunch,7Dinner (7 Meals)
4. Guide = English Speaking Guide and Myanmar tour leader
5. Miscellaneous = Service Tax
6. Our Courtesy = One Bottle of Mineral Water Per pax per day, Juice / Seasonal Fruits During Long Journeys, Welcome & Garlanding at Airport, Boat ride at River Ganges in Varanasi, Toilet Tent on the way if required.
7. Air ticket ( Yangon – Gaya – Yangon ) by Air Indiaor MAI or Golden Myanmar
8. Monument Entrance fees : Varanasi, Sravasti, Lumbini, Vaishali, Rajgir and Nalanda
9. Tipping for driver & guide
10. Visa ( Nepol& India )
1. Insurance cover, Any hike of Government taxes, Expenses of personal nature such as Liquor, Laundry service, Phone Call, Camera fees, Any Additional expenses caused because of flight delays/ rescheduling/ cancellations or conditions beyond our control, Any supplement charges for New Year.